Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Aahkyak ai hkrum zup hpawng ni ( video )
Aahkyak ai hkrum zup hpawng ni ( video )
at 9/29/2013 11:15:00 AM
Myen asuya gaw anhte KIO ni zawn Mung shawa ni hte Bawngban ai lam nnga tim anhte KIO Asuya gaw Mabyin ni yawng hpe Mung shawa ni hte Rau galoi tim bawngban na galaw sa ai lam hpe mu lu na hku re.. n dai sumla hkrung gaw KIO ni mung shawa ni hte hkrum zup hpawng galaw ai shaloi na sumla hkrung re..grau na gaw online grai lang ai ni yu la ga..online kaw rai n kai shi ga ni yu hkrup , hti hkrup na KIO hpe myit shut taw ai hpu nau ni yu yu ga.. http://kc-nl.blogspot.com/2013/09/mung-shawa-hte-kio-hkrum-zup-hpawng.html
Elders meet Kachin Activists credits: Kamayut Media —
You will exactly see how the Kachin people love ou...
A rawng la sha grau dat ga ai
မြန်မာပြည်ကြီး မတိုးတက်တာ ဟိုဟာကြောင့် ဒီဟာကြောင့်...
Guns, Briefcases and Inequality: The Neglected War...
Lawan Ladan Masat Shagrin La Ra Ai Lam Kaba Lahkaw...
signature..., htu ai poi kaba hta n-sa htu lawm mu...
Teng Sha Rai sai kun ( Daw - III )
Yawng chye tawn da ra ai lam shana dat ai
Ya hkyak hkyak N Hka Ga mare kaw byin nga ai lam( ...
အောက်တိုဘာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပွဲ...
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်း ဇနီး မိသားစုဝင်များ၏ စွက်ဖက်...
တရုတ် ဆေးဝါးတွေကစိတ်မချရဘူး၊ သူတို့ နိုင်ငံမှ မစမ်...
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းက ဒေသခံများ အခက်အခဲ .
Burma shrugged off UN declaration on sexual violen...
လုပ်ထားသမျှ တပိုင်းတစ ဖေါ်ကောင်လုပ်လိုက်ပြီ
MYU SHAYI NI AKYAK LAPAU RE LAM
In Myanmar,aWay to Deliver Aid Behind Rebel Line...
The American-Kachin Rangers ( OSS 101)*
CCN Channel le Kachin Ton Biaruahnak (Chin subtitl...
UMA BUM NSEN
မြန်မာ့မြေမှ တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမများ (၁၃...
မြန်မာစာဟာ ရခိုင်စာပေ ကနေ တုိုက်ရိုက် ယူထားတာပါလ...
"ကျမ ဖေဖေက စစ်သားကနေ နိုင်ငံရေးသမားကို ကူးပြောင်းခ...
ရှေ့တန်းတွင် ကျဆုံးသွားသော စစ်သားတစ်ယောက်၏ မိခင်တစ...
Burmese billionaire Tay Za wants 600,000 acres in ...
လက်နက် ကိုင် တော်လှန်ရေးသမား များ လည်း မြို့ပေါ်တက်...
အသက် ၃၀ အောက် အလားလာအရှိဆုံး နိုင်ငံရေးသမား ၃၀ ဦးစ...
နအဖရဲ့ ရိုးလ်မိုဒယ်လ် နဲ့ ၂ဝ၁ဝ
Cultural Orientation- American mung dan nga sat ng...
Hkawng lang hpu na shiga
ဘန်ကောက်တွင်,ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်း မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင...
လုံးဝ နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူး ပြောပေမယ် ကုသိုလ်လေးရအောင...
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် လက်မှတ် မထိုးတ...
TENG SHA RAI SAI KUN ( DAW - II )
စင်ကာပူ ကချင်စာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မီတီ မှ သဘောထ...
KACHIN ALLIANCE U.S.A hta hpaw hpang wa ai lam. (1...
NyeaMung Dan ( Kadai hkum sa hkra )
ရခိုင်ပြည်နယ်အား ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ဖို့ ဒေါက်တာ...
Myanmar: Objections to Myitsone Dam project
ကေအိုင်အေ ကို ပြန်တိုက်ရန် ဗမာစစ်တပ် မှ ပြင်ဆင်မှုမ...
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ် Blog hti yu ga ( http://aun...
Burmese troops attackedaKachin Independence Army...
ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျှံ ကျော် ပိုင် ဆိုင် ကြသူများ
Kachin state is severely under fighting again for ...
Myenla Madu waamajaw UN hte maigan nlu sa mat ai...
ချင်းနှင့် ကချင်သည် မွေးချင်းညီအကိုများဖြစ် 6ကြာင်...
Majan Bai baw sai ( Akyu grai hpyi Garum ga law )
Diary of Gamlang Razi Expedition
UNFC's Information Release
အစိုးရဖက်က ကြိုးစားနေတဲ့ တနိုင်ငံလုံး အတုိုင်းအ...
Teng Sha Rai Sai Kun ? Daw ( I )
Kade lang pyi shagrau ra
မြစ်ကြီးနားမြို့  အထက (၁) ကျောင်းသား မရန်ဒွဲလာ (န၀...
Brang Shawng (MKM) magam gun hpe myen sa wa ni gap...
'Banned' alcohol secretly sold by police in Thantl...
US government hte Myen hpyenamilitary to militar...
Masat ( 1 ) Dap Ba, Masat (7) Dap Dung Ginra Put...
60% of Investment Already Paid for Suspended Myits...
More than 100 Kachin villagers trapped near Putao ...
K.R.C (10) HPRING CHYEJU SHAKAWN HPAWNG HTA SHINGJ...
Shiga masu ( click on video link )
Mung masa hpung gade mi jat wa ai rai tim, yawng g...
KRC 10th ning hpring chyeju shakawn poi hpeapyaw...
Malaysia kaw oprasi rim hkrum yang gara hku di ai ...
ကေအိုင်အေတွေက ကချင်နိုင်ငံတော် ထူထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်၊...
President Obama's Decision on Syria ( click on you...